Xafiiska kahortaga iyo xakamaynta Cudurka HIV/AIDS oo Tababar u Qabtay Hawlwadeenada 4 Isbitaal iyo 6 Xarun Caafimaad. - Cakaara News
Jigjiga(cakaaraNews) Khamiis June 27,2013.Xafiiskan kor ku xusan ayaa tababar ku saabsan Habka loola macaamiloodo Dadka la Nool Cudurka Hiv/Aids bulshadana aan looga dhex Takoorin u Qabtay Hawlwadeena Dhinaca Caafimaaadka ee ka hawlgala 4 ka mida Isbitaalada Deegaanka iyo 6 Xarun Caafimaada. Sidoo kale Tababarkan ayaa ay ka mid ahayd ujedadiisu sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta iyo maamulka hawlwadeenada Caafimaadku ee dhinaca dawada lagula tacaalo dadka lanool cudurka HIV/Aids ka.
Tababarkan ayaa uu soo diryaariyay xafiiska kahortaga iyo xakamaynta HIV/AIDS ee DDSI oo la kaashaday xafiiska caafimaadka DDSI,sla markaana lagu dardargalinayo habka dawada loo siinayo Xubnaha la nool cudurka si aynan uga kala go'in dawadu,mashruucan dadka la nool viruska Hiv/aids ayaa ay maalgalisaa hay'ada WFP. tababrtayaasha ayaa waxaa lagu barayay casharo la xidhiidha sidii ay u maarayn lahayeen islamarkaana kor uguqaadi lahaayeen adeega daawooyinka lasiiyo dadka lanool cudurka HIV/AIDS ee loo yaqaano ART iyo Sidii aan looga takoori lahayn Bulshada dhexdeeda loona tusi lahaa waji waaagsan oo aan argaax lahayn.
furitaankii Tababarkan oo socon doona muda 3 maalmooda ayaa waxa ugu horeyntii ka hadlay gadh-wadeenka geedi socodka qorshaynta ee xafiiska kahortaga iyo xakamaynta HIV/AIDS ee DDSI Mudane Axmad-deeq oo sheegay in kor uqaadida iyo maaraynta adeega ART gu uu yahay mid u fududaynaya dadka lanool cudurkani in ay sidii loogu talogaly u qaataan Dawooyinka islamarkaana ka helaan faaiidadii logu talo galy taasoo ah mid bilaash lagu siinayo.
Masuulaka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu intaa ku daray in adeegayadan si aada loogaga baahayahay dadka ku dhaqan degmooyinka fogfog ee deegaanka lagana wacyigaliyo halista cudurkan uu u leeyahay Bulshada la iskagana ilaalin lahaa.